| Cidda Aan Nahay
Bakaylaha Shenzhen Technology Co., Ltd. wuxuu u hoggaansamaa fikradda ah "iskaashi furan, mustaqbal guul leh" falsafadda ganacsiga tan iyo markii la helay. Saldhigyada jihaynta suuqa iyo waayo -aragnimada isticmaalaha si ay u jebiyaan xaddidaadda warshadaha si joogto ah.
Waxaan leenahay shaqaale ay ka buuxaan xamaasad iyo kooxda R&D ee ugu xoogga badan.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan ka gudubno filashooyinka macaamiisha ee badeecadaha iyo adeegyada maalin kasta.
Waxaan rumeysanahay in: tayada kaliya ee aadka u fiican ay difaaci karto qiimaha badeecada, kaliya sumcadda suuqa si ay ixtiraam badan uga hesho isticmaaleyaasha ugu dambeeya.
Alaabtayada ayaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, daawada, cunnada fudud, qaybinta silsiladda qabow iyo beeraha kaleba. "Bakayle" wuxuu sii wadi doonaa hagaajinta tayada badeecada iyo Badbaadada & Ilaalinta Deegaanka si uu bulshada wax ugu biiriyo.
+ Waxaan ku adkeysaneynaa inaan dejino sumcadda ugu wanaagsan, tayada ugu fiican iyo adeegga ugu fiican sida yoolalka guud.
Waqtigan xaadirka ah, alaabadayada kaliya laguma iibin dhammaan suuqyada Shiinaha, laakiin sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Singapore, Malaysia iyo dalal kale oo caalami ah. Waxaan leenahay xiriir muddo-dheer ah oo iskaashi Koonfur-bari Aasiya, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Si aad u abuurto badeecado aad u fiican sida waajibkayaga, ku soo ururi xoog by ammaan dadweynaha; Si aad uga gudubto rajada macaamiisha sida yoolka, inaad noqoto halyeey daacadnimo.
Si aad u raacdo istaraatijiyadda Qaranka ee “Hindisaha Suunka iyo Wadada”, qaado caqabad oo kor u qaad tayada waddada.
Qiimayaashayada asaasiga ah:
Xoog -saar, Hal -abuur, Masuuliyad, Mahadnaq.
dejinta tayada oo saldhig u ah, si loo dhimo qiimaha iyada oo loo marayo warshadaynta sii kordhaysa, si loo bixiyo tayada ugu fiican, alaabooyinka ugu yaabka badan oo leh qiimaha ugu fiican iyo adeegga ugu fiican.